Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịhụ weebụsaịtị gị | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 25, 2019 Tọzdee, Eprel 25, 2019 Virginia Jacko
Maka ndị njikwa weebụsaịtị na ọtụtụ azụmaahịa, nnukwu na obere, oge a gara aga bụ oge oyi nke enweghị afọ ojuju ha. Malite na December, ọtụtụ a kpọrọ aha ụlọ ọrụ nka na New York City ikpe, na veranda abụghị naanị ya. Emeela ọtụtụ narị suut n'oge na-adịbeghị anya megide azụmaahịa, ụlọ ọrụ ọdịnala, ndị otu na-ahụ maka ọdịmma ya na ọbụlagodi ihe ngosi Beyonce, onye akpọrọ websaịtị na uwe ime ihe gbara akwụkwọ na Jenụwarị.
The vulnerability na ha nwere na-emekarị? Enweghi ike inweta ndi uzo kpuru ìsì ma obu ndi isi. Ndị gbara akwụkwọ gbara akwụkwọ na-akpata ikpe iji kpalite azụmaahịa iji webata weebụsaịtị ha nnabata na iwu ndị America nwere nkwarụ, si otú ahụ na-eme ka ndị ìsì na ndị isi kpuru ìsì nweta ha.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka akụkụ nke ọrụ nzukọ gị, ajụjụ ị kwesịrị ịjụ bụ:
Enwere m weebụsaịtị zuru ezu?
You na-emechi ndị ahịa nwere ike?
A na-ebipụ ndị kpuru ìsì na ndị na-adịghị ahụcha ụzọ dị ka m - agbanyeghị na-amaghị ama - n'akụkụ buru ibu nke ndụ nke ị nwere ike ọ gaghị eji akpọrọ ihe. Nchegbu m nwere maka ụmụ akwụkwọ kpuru ìsì na-emechibidoro ịmụ ihe na ntanetị mere ka m dee edemede banyere mkpa ọ dị imepụta gburugburu ụwa maka Mee 8th 2011 mbipụta nke Ihe omumu nke nkuzi ka elu, otu mpempe iji mee ka ndi mmadu mara ihe na ndi otu IT ha.
Iwu Nwere Nkwarụ Ndị America
Maka ndị ìsì, mkpa maka ịnweta weebụsaịtị - na Nkwenye ADA nke nwere ike ịkwado ya - gbasaa n'ofe mpaghara, site na agụmakwụkwọ gaa azụmaahịa, ọrụ, ụlọ ọrụ ọdịnala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n ’ị na-ahụ ụzọ, chee etu ị siri dabere na ntanetị ị n’ọrụ gị kwa ụbọchị na ndụ ụlọ. Ole weebụsaịtị ka ị na-aga na ụbọchị? Cheedị ihe ọ ga - adị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta saịtị ndị ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ị na - ezute ọtụtụ ihe ị na - enweghị ike ịme.
N'agbanyeghị iwu, enweghị nnweta web yana izizi. Beingbụ onye emechiri emechi, ịghara ịnweta weebụsaịtị nke ọtụtụ azụmahịa, azụmahịa na ndụ n'onwe ya dabere n'ụwa anyị taa, nwere ike ime ka ndị gbara akwụkwọ gbara akwụkwọ gaa ụlọ ikpe. Mgbe ndị gbara akwụkwọ gbara akwụkwọ, ha na-ekwu ya ADA. May nwere ike icheta ADA dị ka iwu na-enyere aka na oche nkwagharị aka ịnweta ụlọ ọha, mana nke ahụ abụghị naanị ya.
Iwu nkwarụ nke ndị America (ADA) na-amata ndị nwere niile nkwarụ nwere ikike nha anya, gụnyere ndị kpuru ìsì na ndị isi, na nke a pụtara ịnweta ntanetị dijitalụ na ntanetị na mgbakwunye na oghere nkịtị. Ọ bụ n’etiti okwu a ugbu a iju mmiri ADA suut.
Ndị ìsì na ndị isi na-ahụ ụzọ na-eji onye na-agụ ihe enyere anyị aka ịnyagharịa ma jiri weebụsaịtị. Ndị na-agụ akwụkwọ mara ihe dị na ihuenyo ma jiri kọmputa na-agụ ya n'olu dara ụda, na-eme ka anyị nwee ike ịnweta ihe anyị na-apụghị ịhụ. Ọ bụ teknụzụ nke na-eme ka ebe egwu dị.
Mana, a kpochiri anyị kpamkpam mgbe anyị nwetara weebụsaịtị ndị anaghị edebe koodu ka anyị wee nwee ike ịnyagharịa anyị. Ọ bụrụ na ị na-anwa ịtụ ahịa nri, dee ụlọ ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ nweta weebụsaịtị webụsaịtị dọkịta gị na saịtị ahụ akwadoghị maka ịnweta, ịmechara. Cheedị echiche ịnwa ime ka ọrụ gị rụọ n’enweghị ike ịgụ ihuenyo; nke ahụ bụ ihe na-echebara ndị ìsì na ndị isi na-ahụ ọrụ anya kwa ụbọchị.
Gbochie saịtị gị ka ị ghara ịghọ Ikiri ụkwụ Achilles
Maka azụmaahịa buru ibu, ihe a na-eme maka idozi kwụ ọtọ. Ha nwere akụrụngwa na nnabata, ndị ọrụ iwu na ndị ọrụ IT iji webata weebụsaịtị ha ngwa ngwa na ihe ADA chọrọ. Ha nwere ike mezigharia ihe omume ma degharịa koodu ngwa ngwa iji kwado mkpa nke ndị ọbịa kpuru ìsì, na-enye ohere ma na-agbadata nnabata.
Ma, obere azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-abụkarị ndị aka mgba. N'ajụjụ ọnụ a gbara ajụjụ ọnụ, ndị nwe ụlọ ahịa pere mpe na ndị na-ajụ ase, bụ ndị akpọrọ akpọrọ na ADA suit na-ekwu na ọ na-adị ha ka ọ bụ ngwangwa.
Enwere ike idozi nke a maka uru onye ọ bụla. Jụ ndị otu nkwado maka ndị ìsì na ndị isi na-ahụ ụzọ nwere ike bụrụ mbido dị ukwuu maka otu ndị a, ma nwee ọtụtụ ụkpụrụ nduzi iburu n'uche ka ha na-amalite usoro iji nweta nnabata ADA na weebụsaịtị ha.
Ihe Can Pụrụ Ime iji jide n'aka na weebụsaịtị gị dị
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na i nwere azụmahịa ma ọ bụrụ na ị chọghị ka a manyere gị irube isi n'iwu obodo? Ofga n'ihu nsogbu ahụ na-efu obere ma bụrụ ihe amamihe dị na ya:
Soro onye isi ọrụ gị ma ọ bụ ọkachamara gị rụọ ọrụ iji hụ na weebụsaịtị gị dabara adaba Iwu ADA na ọkwa WCAG 2.0 / 2.1 nke nnweta nnweta zuru ụwa ọnụ;
Chọọ ndụmọdụ site na otu ndị na-akwado maka ndị ìsì ma ọ bụ na-adịghị ahụ ụzọ, dị ka nke anyị. Ha nwere ike ịnye nyocha weebụ, nyocha, na ịnweta ngwaọrụ ndị nwere ike ime ka ị kwenye;
Gbaa ndị coders gị na ndị okike ọdịnaya aka iji melite weebụsaịtị gị site na:
Mkpọchi bọtịnụ, njikọ na onyonyo nwere nkọwa ederede, amara dị ka mkpado alt;
Gbanwee atụmatụ nke na agba ihu na ndabere ga-ezu iche;
Gbaa mbọ hụ na webụsaịtị gị na-adị mfe ịnyagharịa site na iji a kiiboodu.
Iji ọzụzụ n'efu na ihe ntanetị iji nọrọ n'elu iwu.
Onye gị na ndị otu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, na-ekwekọrịta nkwa iji mee ka weebụsaịtị gị nweta ndị nwere nsogbu anya site na ngwụcha oge ị setịpụrụ.
Omume ndị a na-erite uru na ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ: site na itinye ya, ị na-akpọkwu ndị ahịa na ndị na-akwado ya weebụsaịtị gị - ọnụ ụzọ nke nzukọ gị. Site na iburu ụzọ, ị na-eme ka echiche ọha na eze dịkwuo mma; uru gị na-abawanye mgbe ị mepụtara ohere maka ohere. Ọ bụ ya mere Miami Lighthouse maka ndị ìsì na ndị isi bụ otu n'ime ndị mbụ na-enye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na mba nyocha weebụ iji hụ na nnabata na ADA.
Mee elu mee ala, ihe a bụ ime ihe ziri ezi. Site na ịbawanyewanye ohere, ị na-erube isi n'iwu ma hụ na enyere ndị mmadụ - n'agbanyeghị ikike ha - ka ha nyere ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị na ọ dị mma, ọ bụ American, na azụmaahịa anyị, ụlọ ọrụ ọdịnala na nnukwu kpakpando dịka Beyonce kwesịrị icheta nke ahụ. Inclusives abughi nani a mma ihe - ọ bụ nri ihe.
Tags: adaAmerica nwere nkwarụ na-emekpuru ìsìikpeisi
Virginia Jacko bụ onye isi ala na onye isi oche nke ụlọ mposi maka ndị ìsì na ndị nwere nsogbu anya, nke na-agbanwe ndụ ihe karịrị mmadụ 75,000 kwa afọ site n’igosi ha etu esi ahụta n’anaghị ahụ.